संसदीय समितिकाे सभापतिमा लागि यसरी हुँदैछ हानथाप ! -
संसदीय समितिकाे सभापतिमा लागि यसरी हुँदैछ हानथाप !
२३ श्रावण २०७५, बुधबार ०८:५५ 266 पटक हेरिएको
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा नियमावली बनेको दुई महिनापछि संसदीय समितिहरूले पूर्णता पाएसँगै संसदीय समितिमा सभापतिका लागि शीर्ष नेताहरूको दौडधुप सुरु भएको छ ।
आजको राजधानी दैनिकले संसदीय समितिः सभापतिमा हानथाप शिर्षकमा पहिलो पृष्ठमा यो समाचार छापेको छ ।